दुईपटक राष्ट्रपति हुने सौभाग्य प्राप्त विद्या भण्डारीको यस्तो छ अतीत - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
दुईपटक राष्ट्रपति हुने सौभाग्य प्राप्त विद्या भण्डारीको यस्तो छ अतीत
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रोपटक पनि नेपालको राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य जुरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो तथा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति हुने संयोग जुरेकी भण्डारी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सुअवसर पनि उनैलाई जुरेको छ । मुलुकको सर्वोच्च पदमा दुई/दुईपटक निर्वाचित हुने भण्डारी नेपालकै पहिलो महिला हुन् ।
अघिल्लोपटक २०७२ साल कार्तिक ११ गते नेपालको व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी राष्ट्र प्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने विश्वका अन्य पच्चीस महिलापछि छब्बीसौँ महिला हुन् ।
आमा मिथिला पाण्डे र बुवा स्व. रामबहादुर पाण्डेको कोखमा २०१८ असार ५ गते नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको मानेभन्ज्याङ गाउँमा जन्म भएको थियो । पाँच छोराछोरीमध्ये जेष्ठ सन्तानका रुपमा विद्या भण्डारीको जन्म भएको थियो । ग्रामीण भेगमा एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी उनले संघर्षका अनेकौं उकाली ओरालीहरुलाई छिचोल्दै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पुग्नु र सिङ्गो देशको लागि प्रेरणादायी र उर्जापूर्ण त छँदैछ, गौरवको कुरा पनि हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर र मोरङमा प्राथमिक र उच्चशिक्षा प्राप्त गरिन् । भोजपुर क्याम्पसमा अध्ययनरत हुँदा उनको जीवनयात्राका महत्वपूर्ण क्षण बनेर रहे । त्यही क्रममा भण्डारीले नेपाली समाजको दयनीय अवस्थाका मूलभूत कारणहरूलाई बुझ्ने र नजिकबाट परख गर्ने अवसर पाइन् । लोकतन्त्रबिना मुलुकको अग्रगति संभव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेकी भण्डारी वामपन्थी गतिविधिहरूमा सरिक हुन थालिन् । वामपन्थी गतिविधिमा निरन्तरको क्रियाशीलताकै कारण उनको राजनीतिक दृष्टिकोण उन्नत बन्यो । त्यही निष्कर्षका साथ आम विद्यार्थीहरूको हकहितका पक्षमा लड्दै निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भइन् । यसले भण्डारीको जीवनयात्रालाई कठिन र जोखिमपूर्ण मोडतर्फ धकेलिदियो ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहँदा आफूलाई एउटा नेताका रुपमा स्थापित हुँदै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पूर्वी क्षेत्रको नेतृत्वमा करीव ८ वर्षसम्म सक्रिय रहिन् । यही अवधिमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा अत्यधिक मतसहित कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन् ।
भोजपुरमा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत हुँदै कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित वि.सं. २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) को स्थापनालगत्तै सोही पार्टीको युथलिगको कार्यकर्ताको रूपमा उनको सङ्गठित राजनीतिक जीवनको आरम्भ भयो । त्यसको करीव एक वर्षपछि उनले पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेकी थिइन् । उनी २०३७ सालमा नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल महिला संघको सदस्यसमेत बनिन् । महिला संघमा आवद्ध भएदेखि नै भण्डारी नेपाली महिलाहरूले भोग्नुपरेका उत्पीडनका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइन् । महिला समानता र अधिकारको प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्षरत भण्डारी राजनीतिक जीवन, विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रणी, महिला अधिकारको सक्रिय अभियन्ता र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्षरत रहिन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०३९ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीका लोकप्रिय र चर्चित नेता मदन भण्डारीसँग भयो । विडम्बना ! विद्या र मदनको दाम्पत्य जीवन लामो हुन सकेन । त्यो बेलाका अत्यन्त प्रभावशाली र लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीको २०५० साल जेठ ३ गते सडक दुर्घटनामा परी दुःखद निधन भयो । “दासढुङ्गा काण्ड”को रुपमा चर्चित उक्त रहस्यमय घटनापछि उनको दाम्पत्य जीवन ११ बर्षको छोटो अवधिमै समाप्त भयो । पतिको दुःखद निधनपछि नाबालक छोरीहरू उषाकिरण र निशाकुसुमको लालनपालन र राजनीतिक जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै कुशलतासाथ निर्वाह गरिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को २०५४ माघमा सम्पन्न छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भण्डारी केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन् । त्यसयता लगातार पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । २०५९ सालमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएकी भण्डारी २०६५ सालमा आयोजित आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०७१ सालमा आयोजित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी पुनः पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसदीय राजनीति भने २०५० देखि प्रारम्भ भयो । पति मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त पदका लागि २०५० मा भएको उपनिर्वाचन उनको संसदीय राजनीतिको प्रारम्भ विन्दु बन्यो । उक्त उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट भण्डारी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भइन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उनी काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार ३ पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भइन् ।
यही सेरोफेरोमा २०५५ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि लगातार ३ पटकसम्म उनी उक्त संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । संसद सदस्यका हैसियतले संसदभित्र महिला हकअधिकार र समानताका लागि निरन्तर सक्रिय रहिन् ।
२०६२÷२०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा राज्यका हरेक अंगमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावको प्रस्तावक उनै राष्ट्रपति भण्डारी थिइन् । संसदले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै सरकारलाई यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशन दिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधानले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै नेपाली महिलाहरूले युगान्तकारी संवैधानिक–कानूनी उपलव्धि हासिल गरेका हुन् ।
२०५४ सालमा वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारी २०६६ सालमा रक्षामन्त्रीसमेत बनिन् । नेपालको इतिहासमै रक्षा मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्ने नेपालकै पहिलो महिला हुन् विद्यादेवी भण्डारी । रक्षामन्त्रीको हैसियतले त्यस अवधिमा उनले नेपाली सेनामा पूर्व माओवादी–लडाकुहरूको समायोजन र राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अगाडिसम्म नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका–संसद सदस्यको जिम्मेवारीमा थिइन् ।